Mashruuca maamulka iyo diiwaangelinta dhulka – Vote Cirro – Presidential Election 2017 Somaliland
„Hantida ugu qiimaha badan ee waddan leeyahay waa hantida dhuleed ee ku eeg xuduudihiisa, xisbiga waddani isagoo ahmiyadan ka duulaya wuxuu samayn doonaa diiwaan guud oo loo kaashanayo teknoolojiyada iyo GPS, nidaamkaaso inoo sahlaya inaynu si hufan u maamulno dhulka (jagooyinka) islamarkaana kobcin doona dhaqaalaheena!“
Haddi xisbiga waddani talada waddanka ku guuleysto, taageerada aad na siisan waxaan idinku balan qaadeynaa inaan wax ka qabano dhibaatada dhulka ee soo noqnoqda, dhibaatooyinkaasi waxay dhaliyeen iska hor-imaadyo hubaysan, musuqmaasuq baahsan, bixinta dhulka si ka baxsan sifaha sharciga iyo khasaaro naf iyo maal leh.
Faaiidooyinka nidaamkan diiwaanka guud ee dhulka waxaa ka mid ah;
In la yareeyo muranada iyo khilaafyada dhulka
Cashuurtii waajibka ahayd oo si hufan loo helo kana madhan musuqmaasuq iyo eex qaraabo-kiil
In la hirgaliyo deegaan ku haboon maalgashi islamarkaana dhiirigeliya maalgashi caalami ah oo somaliland aad ugu baahan tahay
In ugu dambeyn ay suurtagal noqoto in dhulku damaanad unoqdo bulshada somaliland si ay deyn ama maalgelin lacageed uga helaan ‘’baanka dhulka ee somaliland’’ baankaaso ku shaqo leh dhamaan deymaha lagu damaanad qaadey dhulka ama jagooyinka. Baankan waxaa hirgelin doona xisbiga waddani.
WAA MAXAY DIIWAANKA DHULKU?
Si guud, diiwaanka dhulku waa diiwaan lagu kaydiyey dhamaan macluumaadka dhulka, jagooyiinka kuwaaso ku xidhan khariidad ama map. Macluumaad kasta oo ku kaydsan diiwaankan waxaa laga helayaa mulkiilaha hadda/kii hore, cabirka dhulka, qiimihi la kala siistey iwm taaso saldhig unoqonaysa cashuurta ku waajibtay islamarkaana hoos udhigi doonta khilaafyada dhuleed, waxaa kale oo fududaanaysa maamuulka dhulka.
ODOROSKA DAKHLIGA CASHUURAHA DHULKA
Tusaale ahaan hargeysa.
Bedka hargeisa: 50 sqkm (50.000.000 sqm)
50% hantida dhuleed ee shakhsi: 25 sqkm
Qiimaha dhexe: 50 $/sqm
Qiimaha guud ee hantida dhuleed Hargeisa: 1.25 bilyan $
Qiimaha cashuurta dhulka: 1,50 % qiimaha iibka
Dakhliga cashuurta sannadkii: 18.750.000 $
Qiimaha cashuurta kala wareejinta: 3,50 %
Qiimaha dhulka la kala wareejiyo sannadkii: 30.000.000 $
Dakhliga cashuurta kala wareejinta dhulka: 1.050.000 $
Isugaynta guud dakhliga cashuurta dhulka: 19.800.000 $
Cashuurtan waa hargeysa oo kaliya laakiin marka dhamaan la xisaabiyo deegaanada Somaliland odhan waxaa soo xaroon kara ilaa $60-70 milyan oo dollar taasoo wax badan ka tari doonta horumarka Somaliland. Dakhliga cashuurta hargeysa waxay maalgelin doonta warshada biyaha badda soo sifeynaysa.
Si fulinta mashruucani u guulaysto waxaa loo qeybin doona dhawr qeybood;
Sannadka 1 iyo 2aad:
xukuumada waddani waxay soo celin doontaa awoodi dawladda dhexe ay u lahayd maamulka iyo maareynta dhulka, si taasna looga midha dhaliyo waxaan degmo kasta ka hirgelin doonaa nootaayo gaar ah iyo sharci awood usiinaya inay kaligood u madax-banaan yihiin shaciyeynta iibka iyo kala wareejinta hantida dhulka.
Sannadka 3aad iyo wixii ka dambeeya:
xukuumadu waxay soo saari doonta qiimaha runta ah ee degmo kasta oo ay jaangoyn utahay qiimaha ay soo gudbiyeen nootaayadu.
Si loo yareeyo lunsiga cashuurta iyadoo la baal marayo nootayada, waxay nootaayadu is barbar dhigi doonta qiimaha saxda ah, haddii 20% wax ka badan ay is dheeraadaan waxaa laga codsanaya qofku inuu keeno qoraal rasmi ah oo cadeyn u ah qiimahaas.
Hirgelinta baanka dhulka ee somaliland, kaasoo qaban doona dhamaan iibka dhulka, cashuurta, fiiga iwm.
Si loo kobciyo lacagta qaranka ee somaliland, iib kasta 50% waxaa lagu bixin doonaa somaliland shilling SLSH, 50% USD.
Mulkiile kasta (kii hore iyo kan dambe) waxay ka furan karaan baank xisaabeed cusub
Baank xisaabeedkan wuxuu damaanad qaadaya inaad deyn ama maalgashi hesho (50% SLSH, 50% USD).
Kadib iib ama kala wareejin kasta si loo diiwangeliyo, shaqaalaha maamulka dhulku waxay soo cabirayaan dhulka ama jagadda cusub iyagoo isticmaalaya qalab laser ah iyo GPS kadibna ku daraya khariidada diiwaanka guud ee dhulka.
SIDUU USHAQAYNAYAA MASHRUUCANI?
Siduu udhan yahay diiwaanka dhulka wuxuu ku shaqeynayaa tiknoolajiyada computerka iyo GPSka taasoo waddankeena ka dhigeysa waddanii ugu horeeyey ee nidaamkan hirgeliya.
Bilowga hore waxaa la hirgelin doona diiwaanka database iyo khariidada. Diiwaanka waxaa loo isticmaalaya computer ku xidhan server iyo kayd backup ah. Khariidada waxaa loo isticmaalaya qalabka laserka oo ay caawinayaan qalabka GPS kadibna khariidada ku sameynaya computer si loo helo sistem leh maclumaad juquraafi (GIS, georgraphical information system).
Diiwaangelinta dhulka waxaa loo maraya hab istratijiyeed iyadoo laga bilaabayo badhtamaha iyo goobaha ganacsi ee hargeysa iyo nawaaxigeeda sadexda sanno ee ugu horeeya doorashada kadib.
Qorshaha xukuumadu waa in degmo kasta ay yeelato xafiis gaar ah oo qaabilsan maamulka iyo maareynta diiwanka dhulka.
Inkasta oo mashruucani aanu ahayn mid baaxad leh islamarkaana xalinaya dhibaatooyinka guud ee Somaliland haddana waa mid aynu talaabo hore ugu qaadeyno inaynu xalino gaar ahaan dhibaatada dhulka, islamarkaana waddankeenu horumar ka gaadho maareynta hantida ma guurtada ah iyo horumarka tiknoolajiyadda(intellectual property and innovation) taasoo dhiirigelinaysa maalgashiyada caalamiga ah oo inoo suurtagelinaya inaynu horumar balaadhan oo dhinac walba ah gaadhno.